Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseSeychelles » Imboni Yezokuvakasha Imaka Umkhosi Wayo Wesine Wonyaka
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ezokuzijabulisa • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Izindaba zaseSeychelles • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba
ISeychelles igubha uSuku Lwezokuvakasha Lomhlaba
USuku Lomhlaba Lwezokuvakasha lonyaka luzogujwa kuleli ngaphansi kwesiqubulo esithi “Ukubumba Ikusasa Lethu” uNobhala Omkhulu Wezokuvakasha, uNkk Sherin Francis, umemezele esithangamini nabezindaba ebesingoMsombuluko, Septhemba 20, 2021, eBotanical House. Lo mkhosi ozothatha isonto lonke uzoba ngoSepthemba 27, 2021, kuze kube ngumhla ka-2 Okthoba 2021. Kukhethwe ingqikithi ethi “Shaping Our Future” ukuthi ingagcini nje ngokushaya ihlombe ngeqhaza lalabo abasebenza kule mboni kodwa nabantu baseSeychelles ukuphela.
Indikimba yakhethwa ukuthi ishayelwe ihlombe igalelo lalabo abasebenza kule mboni kanjalo nabantu baseSeychelles nendawo abaya kuyo.
UMkhosi Wezokuvakasha uzobandakanya inkulumo kaNgqongqoshe Wezokuvakasha, eyokwethula abantu abahlonishwa ngokuthi “Amaphayona Ezokuvakasha.”
Izingane nazo zizobamba iqhaza njengoba zixoxa nabantu bezokuvakasha.
Ingqikimba ethi "Ukubumba Ikusasa Lethu" ikhethwe ukuthi ingagcini nje ngokushayela ihlombe iqhaza labo abasebenza kule mboni kodwa nabantu be Seychelles kanye nendawo okuyiwa kuyo njengoba uMnyango Wezokuvakasha uthuthela ukubandakanya umphakathi kanye nezifunda embonini yezokuvakasha. Usuku lwe-World Tourism Organisation (UNWTO) lweNhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba wonke (i-UNWTO) lubanjelwa emhlabeni wonke ngaphansi kwesiqubulo esithi “Ezokuvakasha Zokukhula Okubandakanya Wonke Umuntu.”
"Umkhosi Wezokuvakasha yisikhathi esikhetheke kakhulu kithina njengoba sizinika isikhathi sokungagcini nje ngokugubha ukuhweba kwethu nendawo esiya kuyo kodwa futhi sibheke nesimo semboni yethu," kusho u-PS Francis ngenkathi ethula ikhalenda lemicimbi yokuphawula ezokuvakasha zaminyaka yonke isonto.
Lokhu kuzobandakanya inkulumo kaNgqongqoshe Wezokuvakasha uSylvestre Radegonde ayibhekise esiGungwini Sikazwelonke, ukwethulwa kwabantu abahlonishwayo njengalezi “Zimbangi Zezokuvakasha,” uchungechunge lokuvela nezingxoxo ezinhlelweni ezibalulekile emsakazweni, kuthelevishini, nasezinkundleni zokuxhumana ezibandakanya izibalo zomkhakha osemqoka kanye nokwethulwa komncintiswano wezithombe phakathi kokunye. Izingane nazo zizobamba iqhaza njengoba zixoxisana nabantu bezokuvakasha esiteshini se-YouTube somnyango wezokuvakasha.
Okusha kulo nyaka kungumsebenzi onomthelela esimweni somcimbi wokutshala izihlahla, ozoba ngo-Okthoba 2, 2021. U-PS Francis wathi lo mcimbi uqinisa ukuzibophezela kwendawo okuya kuyo ekusimameni kanye nemizamo yayo yokuhlala iyindawo eluhlaza. Amalungu e- amaSeychelles umphakathi uyamenywa ukuthi usekele lo msebenzi ngokude ngaphakathi ezinhlanganweni nasemakhelwane ngokutshala isihlahla.
UPS Francis uzwakalise ukuzisola kwakhe ngokuthi ngenxa yesimo esiqhubekayo nalo bhubhane, umphakathi ngeke ukwazi ukuzibandakanya mathupha kule misebenzi, futhi imicimbi izoba isimemo kuphela sababambiqhaza abanqunyelwe noma ibanjwe kwi-inthanethi.
“Sesinciphisile imisebenzi yethu maqondana nezinyathelo zezempilo zomphakathi ezisetshenziswayo. Yize kunemingcele, siyaneliseka ukuthi imicimbi yethu ifaka imisebenzi yezemfundo yokubandakanya abantu abasha kanye nemicimbi esimeme ukugcina imizamo yethu yokugcina indawo esiya kuyo iluhlaza, ”kusho uNkk Francis.
Umphakathi uzokwazi futhi ukujabulela eminye imisebenzi ekude okubandakanya ingxoxo yesigungu kanye neConcours d'Expression Orale yizingane zesikole njengoba imicimbi izosakazwa bukhoma noma isakazwe. Ngoshintsho oluncane kulo mcimbi, umcimbi wokudla uzophinde ufakwe ohlelweni nakulo nyaka njengoba abalingani bezokuvakasha bezosingatha le micimbi emagcekeni abo.
Umkhosi Wezokuvakasha waminyaka yonke wukwengeza uSuku Lwezokuvakasha Lomhlaba lwaminyaka yonke olugujwa ngoSepthemba 27 futhi oluqaliswe yiNhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba (i-UNWTO).